Ikati laseBritish Shorthair | Amakati kaNoti
Ikati laseBritish Shorthair
Ikati IBritish Shorthair Uhlobo oluhle kakhulu lwama-fining: athandeka kakhulu, ayadlala, ahlakaniphile, nawo ajabulela impilo enhle kakhulu. Ukubukeka anakho kuyahlaba umxhwele, futhi ngukuthi unamehlo amakhulu akwazi ukuthambisa inhliziyo yakho ngokubabheka nje.
Uma ufuna ikati elifuywayo ongachitha izikhathi eziningi futhi ezimnandi kakhulu ngalo, iBritish Shorthair ingaba ngumngane owufunayo.
1 Umsuka nomlando wekati laseBrithani i-Shorthair
2.1 I-British Shorthair Blue
2.2 IBritish Shorthair White
4 Ukunakekelwa kweBritish Shorthair
6 Kubiza malini i-Shorthair yaseBrithani?
6.1 Ungawathola amakati eBritish Shorthair ukuze athathwe?
7 Izithombe zekati zaseBritish Shorthair
Umsuka nomlando wekati laseBrithani i-Shorthair
I-protagonist yethu ivela e-United Kingdom, njengoba igama lakhe likhombisa; Noma kunjalo, amakati ezifuywayo waseRoma kukhona okhokho babo. Luhlobo lwakudala lwesiNgisi olwaziwayo, futhi olunye lwalezo ezivusa inhlonipho nokubabazeka kakhulu phakathi kwethu abathanda amakati. Esikhathini esedlule yayisetshenziselwa ukulawula inani lamagundane, kepha ngokushesha yathola ukwethenjwa ngabantu, ngoba kwavela ukuthi ithembeke kakhulu kubo.
Noma kunjalo, kwakungakaze kube sekhulwini le-XNUMX leminyaka lapho ukuzala okukhethiwe kwaqala khona. Ngo-1871, iBritish Harrison Weir, yenza ucwaningo ngalolu hlobo olususelwa kumakati aboniswa okokuqala eThe Crystal Palace eLondon. Umbukiso lapho athola khona abalandeli abaningi. Yilapho lapho yaqanjwa kabusha ngokuthi iBritish Shorthair ukuze ingabaphambanisi nekati laseMpumalanga noma i-Angora.
Ngesikhathi sezimpi zomhlaba ezimbili, lolu hlobo lwalusengcupheni yokuqothulwa, ukuze balusindise kwakudingeka babheke kwabanye, njengekati lasePheresiya., ukuzama ukuyibuyisa. Lezi ziphambano zaholela ekati elinekhanda eliyindilinga, imilenze eqinile nombala wamehlo oqinile, ngaphezu kwezinwele ezinde zasePheresiya. Kuthathe eminye iminyaka eminingi yokuzalanisa ngokukhetha ukuqeda lesi sici sokugcina, kwehlukanisa amakati aseBrithani anezinwele ezimfishane kunalawo anezinwele ezinde.
Le nja enemilenze emine enoboya, enesisindo esingu-6 kuya ku-8 kg, iyisilwane esibonakala ngokuba nekhanda elikhulu nezindlebe eziyindilinga. Lezi zokugcina zihlukaniswe kabanzi, futhi zinokuma okungunxantathu. Amehlo makhulu, anombala omkhulu.
Umzimba wakhe unamandla futhi unamandla, ivikelwe ngejazi elifushane, eliminyene nelithambile elingaba noma yimuphi umbala (omhlophe, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, i-tricolor, ushokoledi, isiliva, igolide, i-lilac, isinamoni, i-fawn, i-bicolor). Yize zonke izinhlobo zinhle, iBritish Shorthair blue neBritish Shorthair white yizona ezimbili ezithandwa kakhulu. Futhi akukhona okungaphansi: ukubukeka kwakhe, osekuvele kuyindida, kuyamangalisa. Uma ungangikholwa, ake sibazi kancane:
I-British Shorthair Blue
Ikati laseBrithani elifushane okwesibhakabhaka linokukhethekile kokuthi linamehlo ombala wewolintshi omuhle, onamandla kakhulu, olinika ukubukeka okumnandi kakhulu nokuthambile.
IBritish Shorthair White
Isithombe - Cat Breeds Encyclopedia
Ikati elimhlophe laseBritish shorthair liyamangalisa nakakhulu uma kungenzeka, ngoba lingaba namehlo awolintshi noma aluhlaza okwesibhakabhaka, noma elilodwa lombala ngamunye, futhi linezinwele ezimhlophe, ukubukeka kwalo kudonsa ukunakwa okuningi.
Uhlamvu lwaleli kati eliyigugu luyamangalisa. Unothando, uyadlala, uyajabula. Uyakuthanda ukuba nomndeni, noma ngabe unamalungu amangaki, futhi uvame ukuzwana kahle nezinye izilwane (amakati nezinja).
Ukuphela kwento "engemihle" esingayisho ukuthi kuncike kakhulu kunamanye amakati. Akakuthandi ukuchitha isikhathi eyedwa, futhi empeleni, kungenzeka ukuthi agcine esilandele indlu yonke futhi angafuni ukuhlukaniswa nathi okwesikhashana. Kokunye konke, kuyikati elifanele ukuba nalo efulethini noma endlini, ngoba lijwayela kahle inqobo nje uma isikhathi sinikelwe kulo.
Ukunakekelwa kweBritish Shorthair
Ikati elifushane laseBrithani, njengawo wonke amakati, idinga amanzi ahlanzekile futhi ahlanzekile, ukudla kwekhwalithi (ngaphandle kokusanhlamvu noma okwenziwe ngemikhiqizo), nokuxubha nsuku zonke ukugwema ukwakheka kokwesatshwayo izinwele zamabhola. Kepha hhayi lokho kuphela, kepha ngezikhathi ezithile kuzofanele simuse kudokotela wezilwane, noma ukubeka i imigomo edingekayo, ngenxa ukuthena / ukuchitha futhi njalo uma sisola ukuthi uyagula.
Yize lokhu akwanele. Njengoba sishilo ngaphambili, kubaluleke kakhulu ukuchitha isikhathi, dlala naye, bukela naye ithelevishini, njll. Uyasebenza kakhulu futhi udinga ukunyakaza, ukuzivocavoca umzimba. Ngalesi sizathu, ukuze ujabule futhi ufaneleke, kufanele unikele ngezikhathi ezintathu noma ezine ezimfushane ngosuku, uhlala cishe imizuzu engu-5 lilinye. Ezitolo zezilwane sizothola inqwaba amathoyizi ekati esizoba nesikhathi esimnandi ngayo.
Yize kunguhlobo olujwayelekile kakhulu, lungaba nalezi zifo:
UFeline coronavirus: Idluliswa yigciwane le-corona elihlasela ikakhulukazi amaseli emathunjini ekati, lidale i-gastroenteritis emnene noma engapheli.
UFeline panleucopeina: yisifo esithathelwana kakhulu esibangelwa igciwane lesandulela ngculaza esihlasela kakhulu amakati amancane angagonyiwe, okwenza izimpawu ezifana nokuhlanza kanye nohudo olunegazi, ukungathandi ukudla kanye nomkhuhlane.
I-hypertrophic cardiomyopathy: kuyisifo sofuzo. Kubangela ukuqina kwesisindo se-myocardial se-ventricle yangakwesokunxele, kubangele ukuntuleka kohlelo lokujikeleza kwegazi.
Isifo sezinso sePolycystic: kubonakala ngokutholakala kwama-cysts ezinso acindezela izicubu futhi avimbele izinso ukuthi zisebenze kahle. Uma ikati linalesi sifo, lizoba nezimpawu ezifana nokulahlekelwa isifiso sokudla nesisindo, ukuhlanza, ukungabi nalutho, nokwanda kokusetshenziswa kwamanzi (okuzokwenza ukuthi lichame kakhulu).
Kubiza malini i-Shorthair yaseBrithani?
Uma uzimisele ngokuthola umdlwane walolu hlobo oluhle kangaka, kufanele ukhumbule ukuthi intengo imayelana I-500 euro.
Ungawathola amakati eBritish Shorthair ukuze athathwe?
Kunzima. Ukuba uhlobo oluhlanzekile, futhi oluhle kakhulu, kungokwemvelo ukuthi akukho ukutholwa. Kepha lokho akusho ukuthi abakwazi ukutholakala. Eqinisweni, uma ufuna ngempela ukuhlala nekati yalolu hlobo, sincoma ukuvakashela noma ukuxhumana nezinhlangano nezindawo zokukhosela izilwane, kanye nezindlwana ezisendaweni yakini.
Izithombe zekati zaseBritish Shorthair
Lapha sinamathisela okunye:
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati laseBritish Shorthair
Intengo yenani elibucayi liphakeme kune- € 500, kepha ikhwalithi ayihlanganise lutho nalokho okuthengwe ngaleyo ntengo noma okuphansi. Bangikhohlisa bathengisa ikati ngo- € 450, ekugcineni kwakungelona elaseBrithani (kwakuyikati elimpunga), laligula, lingenalo uzalo ... kwadingeka ukuthi alaliswe esibhedlela futhi ekugcineni washona, saba isikhathi esibi kakhulu. Ekugcineni saphendukela ekotweni le-ASFE futhi konke kwakukuhle, ikati elihle nelinempilo.
UJose Antonio Campos Gonzalez kusho
Ngingalitholaphi ikati elihlaza okwesibhakabhaka ngicela ukubonga
Phendula uJosé Antonio Campos González
Sawubona uJosé Antonio.
Sincoma ukuthi ubuze emtholampilo wezilwane. Mhlawumbe bangakusiza.
I-Coronavirus namakati: bangakwazi yini ukudlulisa lesi sifo kuwe?
IScottish Fold, ikati elinamehlo amnandi